15 Easy yezandla For Kids | Imisebenzi yezandla ivuliwe
15 Easy yezandla For Kids
Isabel Catalan | 05/10/2021 09:00 | Yezandla, Imisebenzi yezandla yezingane
Ingabe izingane zinesithukuthezi ekhaya futhi azazi ukuthi zenzeni ukuze zijabule? Eposini elilandelayo uzothola 15 yezandla lula izingane ezenziwa nge-jiffy futhi ezingaba nazo ukuzijabulisa okuningi enqubweni yokudala futhi kamuva, lapho beqeda umsebenzi wobuciko futhi bengadlala ngawo.
Ukwenza lobu buciko ngeke udinge ukuthenga izinto eziningi. Eqinisweni, uma ningabalandeli bezobuciko, ngokuqinisekile nizoba nabaningana babo ekhaya kusuka ezikhathini ezedlule, yize ungasebenzisa ngokunenzuzo izinto ezenziwe kabusha ukuzenza. Ungaphuthelwa!
1 I-superhero elula enezinti zobuciko kanye nekhadi lekhadi
2 Felt iphazili yezingane
3 Uphawu lwebhathini lomnyango ngomyalezo
4 Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nezingane
5 Kabusha imishini yezandla zikaKhisimusi. U-Snowman
6 Umnenke wekhadibhodi ukwenza nezingane
7 I-piggy bank elula esetshenziswa kabusha ibhodlela lobisi oluyimpuphu noma okufanayo
8 Umumo weJiyomethri wokufaka isitembu, owenziwe ngemiqulu yephepha langasese
9 Ikhadibhodi lekhadibhodi nekhabethe
10 Imbiza yomhleli wepensela wezingane
11 Izikhwama zendwangu zokwenza amakha amakhabethe
12 Ama-slippers ahlobisiwe ehlobo
13 Amathoyizi asetshenziswe kabusha: umtshingo womlingo
14 Ikati lomgcini wepensela
15 Hoops umdlalo
I-superhero elula enezinti zobuciko kanye nekhadi lekhadi
Phakathi kobuciko obulula bezingane ungakuthola kulula lokhu iqhawe elenziwe ngezinti nangekhadibhodi. Izinto ozozidinga ziyinduku ye-popsicle, amakhadibhodi, nomaka onemibala.
Into enhle ngalo msebenzi wobuciko ukuthi ungakwenza ngemizuzu embalwa futhi izingane zizokwazi ukudlala ngawo zisuka. Ngaphezu kwalokho, kungenziwa kube ngokwakho ngokukhetha imibala kanye nohlamvu lwe-superhero ngokuqala kwegama lengane, isibonelo.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe iqhawe elenziwe ngezinti nangekhadibhodi.
Felt iphazili yezingane
Omunye wemidlalo oyintandokazi yokuba izingane zijabule ngamaphazili, kusuka kokuncane kakhulu kuya kokuyinkimbinkimbi kakhulu. Ama-puzzle enziwe ngezindwangu ezifana nokuzizwa alungele ukusebenza ngamakhono wezimoto nezinzwa, okulungele izingane ukuthi zithuthukise amakhono azo okuqonda nawomzimba.
Futhi, le puzzle kulula ukuyenza futhi ungenza zonke izinhlobo zezibalo ongazihlobisa ngazo. Uzodinga indwangu ezwayo, intambo efekethisiwe, inaliti ejiyile ne-velcro yokunamathisela, phakathi kwabanye.
Uma ufuna ukufunda ukuthi ungakwenza kanjani igxathu negxathu, bona okuthunyelwe Felt iphazili yezingane.
Uphawu lwebhathini lomnyango ngomyalezo
Lokhu kungenye yezandla ezilula zezingane ongazenza ngezinto ezimbalwa osuvele unazo ekhaya njengamakhadibhodi anemibala, iphepha le-crepe, isikele, i-glue nezimpawu.
Ngawo wonke la mathuluzi ungadala lokhu uphawu lomlayezo olengisiwe ezinqeni zamakamelo endlu. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani? Bheka okuthunyelwe Uphawu lwebhathini lomnyango ngomyalezo.
Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nezingane
Ngaphezu kokuba ngomunye wemisebenzi yezandla ezilula yezingane, futhi ingenye yezinto ezahlukahlukene kakhulu ngoba ingasetshenziswa njenge umhlobiso wesihlahla sikakhisimusi noma njengekhadi lokubingelela lomuntu okhethekile ngalezi zinsuku.
Kulula kakhulu ukuthi ngisho nomncane kunabo bonke emndenini angabamba iqhaza ekulungiseleleni kwawo. Ukuze ukwenze, uzodinga kuphela ucezu lwekhadibhodi, ipensela, umaka omnyama, amanye amabhola anemibala nezinye izinto ongazibona kokuthunyelwe Umhlobiso we-Christmas reindeer wokwenza nezingane.
Kabusha imishini yezandla zikaKhisimusi. U-Snowman
Enye yezandla ezipholile kunazo zonke zezingane futhi ejwayelekile kakhulu yetimu kaKhisimusi ongayenza yi- amakhadibhodi snowman.
Uzodinga imiqulu yamaphepha engenalutho, irabha ye-foam, ama-pom pom, uzizwe, omaka, nezinye izinto ezimbalwa. Umphumela muhle kakhulu, kungaba ukuhlobisa igumbi lezingane noma ukulisebenzisa njengethoyizi lokuzijabulisa isikhashana.
Uma ufuna ukubona zonke izinyathelo zendlela yokukwenza, ungaphuthelwa okuthunyelwe Ukuvuselela Imisebenzi Yezandla ZikaKhisimusi: U-Snowman. Ngokuqinisekile kuzobukeka kukuhle kuwe!
Lo mnenke omncane ungomunye wemisebenzi yobuciko yezingane esheshayo yokwenza. Kuhle ngabancane ukuthi bafunde ukwenza imisebenzi yezandla bebodwa futhi babe nesikhathi esimnandi kakhulu sokuthuthukisa umcabango wabo.
I-piggy bank elula esetshenziswa kabusha ibhodlela lobisi oluyimpuphu noma okufanayo
Manje njengoba kuqala unyaka omusha sekuyisikhathi esihle sokufundisa izingane ukuthi zonge umholo wazo ukuze zikwazi ukuthenga ama-trinket namathoyizi unyaka wonke.
Indlela emnandi yokukwenza ngokwenza lokhu piggy bank nebhodlela lobisi oluyimpuphu olusetshenziswe kabusha. Ngenye yezandla ezilula zezingane lapho uzodinga khona izinto ezimbalwa: isikebhe, uboya obuncane, umsiki kanye nosawoti oshisayo.
Uma ufuna ukwazi inqubo yokukhiqiza yaleli bhange le-piggy, ungaphuthelwa okuthunyelwe I-piggy yasebhange elula yokuphinda isebenzise uhlobo lobisi lwe-powder can.
Umumo weJiyomethri wokufaka isitembu, owenziwe ngemiqulu yephepha langasese
Ngabe ufuna ukusiza abancane ukuthi bahlobise izinto zabo zesikole ngendlela emnandi neyangempela? Bese ubheka okuthunyelwe Umumo weJiyomethri wokugxivizwa ngama-roll wephepha langasese ngoba kungenye yezandla ezilula zezingane ongazenza ngokuphazima kweso ngezinto ezimbalwa onazo ekhaya. Uzodinga kuphela omaka, amanye amabhokisi ephepha asendlini yangasese kanye nezinye izincwadi zokubhalela.
Ikhadibhodi lekhadibhodi nekhabethe
Enye yezandla ezilula zezingane ongazenza ngekhadibhodi encane, iphepha le-crepe, omaka kanye ne-glue yilokhu ikhadi lesimvemvane nephepha le-crepe kuhle kakhulu. Akuthathi isikhathi eside ukukwenza futhi akunasikhathi uzoba nomhlobiso omncane wokuhlobisa igumbi labantwana.
Ukwazi ukuthi ungakwenza kanjani bheka iposi Uvemvane wekhadibhodi nekhabethe lapho kufika khona kuchazwe kahle igxathu negxathu.
Imbiza yomhleli wepensela wezingane
Izingane zivame ukuqoqa inani elikhulu lamakhrayoni, amapensela kanye nomaka ukupenda okuthi ekugcineni bagcina bezungeza indlu. Ukugwema ukulahleka nokuba nayo yonke imidwebo endaweni eyodwa, zama ukwenza lokhu izingane ipensela umhleli imbiza.
Nazi ezinye zezinto ezilula kakhulu futhi ezimibalabala ezenziwe ngezandla ezinganeni. Ngaphezu kwalokho, kuzokuvumela ukuthi uvuselele kabusha izinto osunazo ekhaya esikhundleni sokuzilahla.
Uma ufuna ukwazi ukuthi ungawenza kanjani lo msebenzi wobuciko, ungaphuthelwa okuthunyelwe izingane ipensela umhleli imbiza.
Lezi izindwangu zokufaka amakha amakhabethe Kungobunye ubuciko obulula bezingane okuthi, ngaphezu kokunikeza izingane isikhathi esihle, futhi kuzosebenza njengesiqabuli semvelo sezingubo, esizovimbela izingubo ukuthi zingatholi iphunga nomswakama.
Zimibalabala, ziyasebenza futhi zilungele izipho. Ntambama efanayo ungenza eziningana ngendwangu encane, izimbali ezomisiwe kanye ne-lavender noma isinamoni essence. Ukwazi ezinye izinto zokwenza lo msebenzi wobuciko, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Izikhwama zendwangu zokwenza amakha amakhabethe. Kuzoba yinjabulo ukuvula amakhabethe!
Ama-slippers ahlobisiwe ehlobo
Hlobisa amanye amateki amhlophe anezimpawu Ngenye yezandla ezinhle kakhulu ezilula ezinganeni ongazenza. Ungasiza abancane ukwenza imidwebo yedizayini elula. Uzodinga kuphela amateki amateki namamaki endwangu amabili abomvu naluhlaza.
Ungenza ukwakheka kwama-cherries noma usebenzise umcabango wakho bese upenda lowo omthanda kakhulu. Eposini Ama-slippers ahlobisiwe ehlobo uzothola ividiyo ukwenza kabusha lo msebenzi. Ungaphuthelwa!
Amathoyizi asetshenziswe kabusha: umtshingo womlingo
Kwesinye isikhathi amathoyizi alula kakhulu yilawo izingane ezithanda kakhulu ukuba nesikhathi esimnandi nesijabulisayo. Kuyindaba ye- Umtshingo Womlingo, omunye wemisebenzi yezandla ezilula ongayenza ngemizuzu embalwa.
Ukwenza leli thoyizi ungasebenzisa izinto ezenziwe kabusha onazo ekhaya njengezinye ama-straws noma ama-straws okuphuza i-soda. Futhi uma ungenazo, ungazithola kunoma yisiphi isitolo esikhulu.
Ngaphandle kwezimpondo uzodinga ithephu noma itheyiphu. Enye indlela i-glue, kepha uma ungakhetha i-tape, ngiyincoma ngoba kuzoba ngcono kakhulu, kube lula ukuyenza futhi iphephe kakhulu. Njengoba ukwazi ukubona, udinga izinto ezimbalwa kuphela!
Ikati lomgcini wepensela
Uma uthanda ukusebenzisa kabusha, omunye wemisebenzi yezandla elula ongayenza yilokhu ikati lomgcini wepensela ngemiqulu yamakhadibhodi ephepha langasese onalo ekhaya. Kokunye, ngeke udinge izinto eziningi ngaphandle kwezimpawu ezithile, isikele, iglu elincane namehlo athile wobuciko.
Uma ufuna ukwazi ukuthi unglenza kanjani leli kati elihle igxathu negxathu, ungaphuthelwa okuthunyelwe Ikati lomgcini wepensela.
Este Iqoqo lamasongo Ngenye yezandla ezilula zezingane ongazenza ngezinto onazo ekhaya. Ikhadibhodi elincane, umqulu wamakhadibhodi wephepha lasekhishini, omaka kanye neglue kuzokwanela ukwenza lo mdlalo omnandi ongadlala ngawo imidlalo ethile ngaphakathi noma ngaphandle kwekhaya.
Ungathanda ukwazi ukuthi le sethi yamasongo yenziwa kanjani? Bheka okuthunyelwe Iqoqo lamasongo lapho uzothola khona imiyalo eningiliziwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » 15 Easy yezandla For Kids
Imibono emi-4 yokuhlobisa izindlu zethu nge-Halloween